Daan daansi la sheegay in ay wado Somaliland oo laga digay iyo Fariin loo diray Dowladaha Dariska – Somalia247
Daan daansi la sheegay in ay wado Somaliland oo laga digay iyo Fariin loo diray Dowladaha Dariska
Shirkii Golaha Wasiirada Puntland uu shir guddoominayey Madaxweyne kuxigeenka Maamulka Puntland Eng. Cabdixakiim Xaaji Cabdullaahi Cumar Camey ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay ka midyihiin:
Ansixinta xeerka saxaafada Puntland
Xeerka Biyaha Puntland
Xeerka xuquuqda Caruurta iyo Warbixino.
Xaaladda Amniga Dalka
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa ku dhawaaqay in laamaha amnigu ay dhammaan Magaalooyinka waaweyn ee Puntland ka samaynayaan baaritaano sugan oo xagga amniga ah gaar Caasimada Puntland ee Garoowe, sidoo kale goluhu wuxuu ugu baaqayaa shacabka Puntland in ay si buuxda ula shaqeeyaan Ciidanka ku jira hawl-galka lagu baacsanayo qaswadayaasha ku dhuumaaleysanaya Magaalooyinka Puntland lana wadaagaan xog walba oo ku saabsan amniga ciidanka hawl-galka kujira.
Dhinaca kale goluhu waxa uu uga digeyaa Maamulka Hargeysa, daandaansiga uu ka wado gobollada Sool iyo Cayn, isla markaana goluhu wuxuu caddeeyey in aysan Puntland u dulqaadan doonin in Maamulka Hargeysa uu ka sameeyo tiro koobyo goobo kamidah deeganadaas, wuxuuna goluhu u sheegay Dawladda Federaalka Soomaaliya, Dawladaha deriska ah iyo Beesha Caalamka in cawaacib xumada ka dhalata aagagaas uu mas’uuliyadeeda qaadayo Maamulka Hargeysa.
Golaha Xukuumadda Puntland waxay ansixiyeen xeerka saxaafada Puntland oo guluhu ku sameeyey dibu eegis iyo waxka beddel, sidoo kale xeerka ayaa lagu caddeeyey xuquuqda weriyaha iyo mulkiileyaasha warbaahinta Puntland, Sidoo kale xeerku wuxuu nodon doonaa mid xoojinaya wada shaqaynta dawladda iyo warbaanita madaxa bannaan.
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa ka dooday xeerka ilaalinta iyo kor u daadida tayada biyaha Puntland. Xeerkaan ayaa deexaya horumarinta khayraadka biyaha sida Kannaallada, Biyo xireennada iyo ka faa’iideysiga biyaha oogada sare maraya iyo kuwa dhulka hoostiisa ku jira, isla markaana xeerku wuxuu tilmaamayaa sida looga faa’iideysanayo biyaha dabiiciga ah , harooyinka iyo dooxooyinka waaweyn ee Puntland.
Xeerka Xuquuqda Caruurta Puntland
Golaha Xukuumadda Puntland ayaa ka dooday xeerka xuquuqda carruurta Puntland, xeerkaan oo qeexaya ka hortaggagefka loo geysto caruurta iyo sidoo kale dhaqan toosinta iyo dhiiro-gelinta carruurta si mustaqbalkoodu u wanaagsanaado.
Golaha Xukuudda Puntland ayaa warbixin ka dhegeystay Wasaaradda Duulista Hawada iyo Wasaaradda Qorsheynta iyo Xiriirka Caalamiga ah oo ka warbixiyey hawlo qaran oo ay soo qabteen.
More from my siteMagaalada Muqdisho oo marti gaelinaysa Urur Goboleedka IGADMudaaharaadyada Itoobiya oo xoogeystay iyo Mareykanka oo Muwaadiniintiisa u digayHogaamiyeyasha shirka Madasha wada tashiga oo isku afgartay hanaanka mataalada aqalka sare ee G/Banaadir
PreviousKerry to travel to Kenya, Nigeria and Saudi Arabia
NextAMISOM oo sheegay in ay fashilinayaan weeraro Al Shabaab ay la damacsan yihiin Goobaha Doorashooyinka
SOMALIA	10 dead and as Somali forces end beachside restaurant siege	August 26, 2016
AU to deter Al-Shabaab from disrupting Elections	August 24, 2016
AMISOM is to secure Somali Elections	August 17, 2016
Somalia seizes expired food Aid from Egypt	August 15, 2016
Rio 2016: Somali sprinter Maryam Muse hailed as ‘inspiration’ finished her 400m	August 14, 2016
Africa	South sudan’s Kiir promises safe access to starving civilians as famine bites	February 27, 2017
Kerry to travel to Kenya, Nigeria and Saudi Arabia	August 19, 2016
East African countries face increasing threat from al-Shabab, report says	August 16, 2016
Recent Posts	EU mulls relocation of UK clearing after Brexit,but no decision yet
10 Ruux oo ku dhaawacmay Qarax ka dhacay Magaalada Baardheere
AU to deter Al-Shabaab from disrupting Elections
AMISOM oo sheegay in ay fashilinayaan weeraro Al Shabaab ay la damacsan yihiin Goobaha Doorashooyinka
AMISOM is to secure Somali Elections
Ciidamada DFS, Kenya iyo kuwa Ajaaniib ah oo Weerar ku qaaday Xarumaha Al Shabaab